Somalia: Faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay waddada Maka Al-mukarama Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Somalia: Faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay waddada Maka Al-mukarama Muqdisho
Somalia: Faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay waddada Maka Al-mukarama Muqdisho
Inta la og yahay shan qof ayaa ku dhimatey 10 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen, kadib markii maanta oo Sabti ah gaari ku qarxay waddada Makka al-Mukaram ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan oo ahaa mid la doonaayey in lo adeegsado weerar ayaa loo isticmaaley gaari lagu soo araray bom, kaas oo looga tegey waddaa dhinaceeda.
Wadadda waxaa markaas marayey Guddoomiyaha Gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye oo loo yaqaan Cirfo, waxaana soo gaarey dhaawac aan cusleyn, sidoo kale waxaa wararku sheegayaan in uu ku dhaawacmey Taliyihii Saldhigga Waaberi Cali Muuse iyo 4 askari oo la socotey.
Dad ku dhawaa goobta qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay arkeen 5 qof meydkood, Qaraxan aya sioo kale burbur gaarsiiyey dhisamyaashii ku dhaaa iyo goobo ganacsi, goobta qaraxu ka dhacay waxaa ku dhaw Waaxda Socdaalka Soomaaliya ee bixisa Baasaboorada.
Ururka al-Shabaab ayaa sheegtey weerarkan, waxaana ay sheegeen in ay weerareen saraakiil ka tirsan Dowladda federaalka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ayaan weli ka hadlin qaraxn maanta ka dhacay Muqdisho.
Somaliland: Cali Guray Oo Ka Jawaabay Xil Ka Qaadista Uu Ku Sameeyey Faysal, Kuna Eedeeyey In Loo Soo Adeegsaday Burburka Xisbiga UCID
War Deg Deg Ah: Suurto Gal Maaha Inay Doorashada Qabtaan Komishanka Aanu Kalsoonidi Kala Noqonay” Murrashax Cirro + Muuqaal